Taabid Cabdi oo ka hadlay is qab-qabsi ku aadan dhul ku yaalla Muqdisho – Radio Daljir
Juunyo 3, 2019 6:47 b 0
Guddoomihii hore ee gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay is qab-qabsi ku aadan dhul ku yaalla Magaalada Muqdisho gaar ahaan Jaamacaddaha ilaa iyo Ex-Kantarool Afgooye .
Taabid Cabdi oo war qoraal ah ku soo qoray bartiisa facebook-ga waxa uuna uga hadlay arimaha Dhulalka danta guud oo ay dawladu leedahay .
Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo qoray Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir
Arimaha dhulalka danta guud oo ay dowladdu leedahay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaan ku baaqayaa marka dowladdu usoo baahato in Guddiga loo xilsaaray ay si nabad ah, dhimrin leh u wajahaan oo marwalba wadada nabadda loo maro oo uusan dhiig ku daadan. Gaar ahaan xasaradda ka taagan soonaha jaamacaddaha ilaa iyo Ex-kontorool Afgooye oo shalay galab shaqaaqo ka dhacday.
Waxaa lagu jiraa dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadan waana laga fiican yahay in dad shacab ah ku barakacaan dagaal dhiig ku daato, anigoo hubo in arrintaas wadahadal lagu dhameyn karo.
Waxaan ku baaqayaa in waanwaan wax lagu xaliyo, la iskuna turo maadama aanan sinna la isku huridoonin.
Dhulka danta guud ee dowladdu u baahato iney ugu adeegto shacabka soomaaliyeed waxaa haboon in loo maro wado nabdoon oo aan abuurin rabshado iyo xasilooni darro, madaama qofka deganba uu yahay muwaadinka la doonaayo in loogu adeego.